Semalt:6व्यवसाय को लागी वेब स्क्र्यापिंग को लाभ
वेब स्क्र्यापि the टेक्निक हो जसले हामीलाई द्रुत र प्रभावशाली ढ different्गले विभिन्न वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्न अनुमति दिन्छ। यो स्टार्टअपहरू, मार्केटरहरू, सामाजिक मिडिया विज्ञहरू, अनलाइन अन्वेषकहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, प्रोग्रामरहरू, विकासकर्ताहरू, र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि लाभदायक हुन्छ। वेब स्क्र्यापिंगले छोटो समयमा गुणवत्ता डेटाको प्रावधान सुनिश्चित गर्दछ।
वेब स्क्र्यापिंगको मुख्य फाइदाहरू तल वर्णन गरिएको छ।
निस्सन्देह, वेब स्क्र्यापि पढ्न योग्य डाटा प्राप्त गर्न सस्तो तरीका हो। Import.io सहित इन्टरनेटमा ठूलो संख्यामा स्क्र्यापिंग सेवाहरू उपलब्ध छन्, जुन तपाईंलाई आवाश्यक वेब पृष्ठहरूबाट नि: शुल्क डाटा निकाल्न सजिलो बनाउँदछ। यसैले, स्क्र्यापि mainly मुख्यतया स्टार्टअपहरू र विद्यार्थीहरू जसले डाटा एक्स्ट्र्याक्टरहरूमा थप पैसा खर्च गर्न चाहँदैनन्का लागि राम्रो हुन्छ।
२. लागू गर्न र एकीकृत गर्न सजिलो
एकचोटि तपाईंले आफ्नो मनपर्ने डाटा निकाल्ने वा वेब स्क्र्यापि program प्रोग्राम छनौट गर्नुभयो, तपाईं आफ्नो व्यवसाय बढ्न सक्नुहुनेछ र धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। यो किनभने वेब स्क्र्यापिंग सेवाहरू र अनुप्रयोगहरू लागू गर्न सजिलो छ र सबै वेब ब्राउजरहरू र अपरेटि systems प्रणालीहरूको साथ एकीकृत गर्न सकिन्छ। तिनीहरूले स्क्यान गर्न वा निकाल्न सक्छन् तपाईंको ब्लगको केहि पृष्ठहरू वा कुनै समस्या बिना सम्पूर्ण साइट।
Low. कम रखरखाव आवश्यक छ र उच्च-गति सुनिश्चित गरिएको छ
धन्यबाद, अहिले सम्म धेरै डाटा स्क्र्यापिंग कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ। तिनीहरूलाई कम वा कुनै रखरखाव आवश्यक छ र राम्रोसँग निकालेको र राम्रो संरचित डाटा दिन्छ। ParseHub यस्तो कार्यक्रम हो कि लामो समय सम्म मर्मतको आवश्यकता पर्दैन र ठूलो नतिजाको आश्वासन दिन्छ। वेब स्क्र्यापिंग सेवाहरूले तपाईंको डाटा निकाल्न कम समय लिन सक्दछ र म्यानुअल डाटा निकाल्ने प्रविधिहरू भन्दा धेरै उत्तम छ।
वेब स्क्र्यापिंगले सही र प्रामाणिक परिणामहरू सुनिश्चित गर्दछ, र म्यानुअल स्क्र्यापिंग विधिहरूको भन्दा धेरै राम्रो छ। केहि वेब स्क्र्यापिंग उपकरणहरू द्रुत र विश्वसनीय छन्। तिनीहरूले सेकेन्ड भित्र उपयोगी डाटा प्रदान गर्दछ र तपाईंको पाठमा गल्तीहरू छोड्दैन। डाटाको सटीक निष्कर्षण व्यवसायको मूल आवश्यकता हो। यदि तपाईं बिक्री मूल्यहरू वा घर जग्गा नम्बरहरूसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तपाईंको वेब स्क्र्यापि program प्रोग्राम वा सफ्टवेयर बुद्धिमानीपूर्वक छान्नु पर्छ।
Easy. विश्लेषण गर्न सजिलो
जो कोही विशेषज्ञ र अनुभवी छैनन्, को लागि स्क्र्यापिंग उपकरण s को लागी बुझ्न सजिलो छ र सजीलै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। स्क्र्यापि software सफ्टवेयरबाट फाइदा लिन तपाईंले C ++ वा HTML जस्ता केही भाषाहरू सिक्नुपर्दैन। थप, त्रुटि मुक्त डाटा सुनिश्चित गरिएको छ, र सानो हिज्जे गल्तीहरू छिटो फिक्स गरियो, तपाईंलाई गुणवत्ताको लागि वेब पृष्ठहरू विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउँदछ।
6. आफ्नो समय बचत गर्नुहोस्
यदि तपाईं एक स्टार्टअप हुनुहुन्छ भने, तपाईंसँग धेरै कुरा गर्नै पर्दछ। तपाईं आफ्नो व्यवसायको मार्केटिंग र पदोन्नतीमा व्यस्त रहनुहुनेछ र म्यानुअल डाटा निकासीको लागि समय खाली गर्न सक्नुहुन्न। सही प्रकारको स्क्र्यापिंग उपकरणहरूको प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो समय र उर्जा दुवै बचत गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, कन्नोटेट एक व्यापक र अद्भुत वेब स्क्र्यापि program प्रोग्राम हो जसलाई कुनै कोडिodको आवश्यकता पर्दैन र बीस मिनेटमा तपाईंको लागि ठूलो संख्यामा वेब पृष्ठहरू निकाल्न सक्छ। यो निश्चित रूपमा समय बचत हो। सही प्रकारको उपकरणहरूको साथ तपाईं सम्पूर्ण वेबसाइटलाई स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ। डाटा पढ्नयोग्य ढाँचामा मात्र प्राप्त गरिन्छ।